Haleellaa garee IS irratti raawwatameen hoogganaan garichaa ajjeefameera jedhan Tiraamp - BBC News Afaan Oromoo
27 Onkololeessa 2019
Haaromsameera 28 Onkololeessa 2019
Abu Bakr al-Baghdadi bara mootummaa "caliphate" hundeessuuf Moosul keessatti labsa labse
Jireenya baqaan miliqee jiraachaa kan ture hoogganaan garee IS Abu Bakr al-Baghdadi wayita loltoonni Ameerikaa Kaaba Baha Siiriyaa keessatti duula eegalan of ajjeese jedhan Pirezidaanti Doonaaldi Tiraamp.
Bakka Masaraa Mootummaa White House irraa haasawa kan taasisan Pirezidaanti Tiraamp Abu Bakr al-Baghdadi wayita saroonni loltoota Ameerikaa isa ari'an battalumatti meeshaa harkaa qabuun of ajjeese jedhan.
Abu Bakr al-Baghdadi bara 2014 bulchiinsa "caliphate" hundeessuuf wayita labsu haalaan beekame.
Gareen IS ofiin jedhu lammiilee nagaa 741 ajjeese
Hidhattoonni IS lammiilee Itoophiyaa ajjeessan
Kaaba Baha Siiriyaa keessa maadheffatee jiraachuun kan himamu Abu Bakr al-Baghdadi loltoota Ameerikaatiin hedduu adamsama.
Maddeen Oppireeshinii halellaa qondaala IS irratti gaggeessuuf bobba'etti dhiyaatan akka jedhanitti gareen ergama kana fudhate kan duraaniirraa adda kan ta'ee fi leenjii tikaa fi waraanaa olaanaa namoota fudhataniidha.
Aanga'oonni US madda oduu Rooyitarsitti akka himanitti qondaala IS haleeluuf oppireeshiniin gaggeeffameera, garuu ajjeefamuun Baghdadi hin mirkanoofne.
Qondaalli IS kun kanaan duras ajjeefameera jedhamuun dogoggoraan gabaafamee ture.
Abu Bakr al-Baghdadi eenyu?
Hoogganaan IS kun addunyaarratti nama sadarkaa jalqabaarratti barbaadamuudha.
Ameerikaan bara 2011 keessa shororkeessaadha jettee moggaaste.
Nama kan qabuuf yookiin ajjeesuuf odeeffannoo nama kenneef doolaara miiliyoona 10 kennuufis waadaa seentee turte.
Baghdadin nama dirree waraanaatti mala loltummaan beekamtii olaanaa qabuudha jedhama.
Bara 1971 Kaaba Baghdad naannawa Samarra jedhamutti kan dhalate namni kun maqaa sirriin isaa Ibrahim Awad al-Badri jedhama.
Bara 2003 wayita humni waraanaa Ameerikaan hoogganamu Baghdaad weerare Abu BAkr al-Baghdadi duree amantii Islaamaa ta'uun masjiida tokko keessaa tajaajilaa ture jedha gabaasi.
Namni kun bara hooggansa Saadaam Huseen Humna waraanaa ajajaa akka ture dubbatama.
Gabaasi biraan ammoo namni kun wayita waggaa afuriif Kaampii Bucca keessatti to'annoo Ameerikaa jala turetti inumaa ilaalchasaatti cimee itti cichee hafe jedha.
Kaampiin Bucca Kibba Iraaq keessatti kan argamu yoo ta'u bakka qondaaltonni waraanaa al-Qaa'idaa itti hidhamaa turaniidha.
Abu Bakr al-Baghdadi bara 2010 hoogganaa al-Qaa'idaa ta'ee as ba'e.
IS jalqaba bara kanaa viidiyoo Baghdadi gadi dhiisee ture.
Kanaan dura bara 2014 wayita Moosul irraa hawaasaaf ergaa dabarsu mul'atee ture.
Kutaalee Siiriyaa fi Iraaq keessatti bulchiinsa "caliphate" hundeessuu akka barbaadu labsee ture.
Dirree Waraanaa Moosul: Gareen IS ofiin jedhu lammiilee nagaa 741 ajjeese
Manni murtii Iraaq lammiilkee Faransaay miseensota garee IS irratti murtii du'aa dabarse
Iraaq keessatti awwaalli jumlaa 200 argame
Viidiyoo, Der al-Zur: Qabiyyee Islaamik Isteet dhumaa Siiriyaa keessaa
Daqiiqaa 15 dura
Daa’ima hammatanii of cinaa raffisuumoo kophaa raffisuu?